Egg, Inc. အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（86.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Egg, Inc.
မဝေးတော့သည့်အနာဂတ်တွင်စကြာ0of ာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကြက်ဥတွင်သော့ဖွင့်လိမ့်မည်။ သငျသညျရွှေအလုအယက်အပေါ်ဝင်ရန်နှင့်သင်တတ်နိုင်သလောက်ကြက်ဥများရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီ။ Hatch Charks, Hatch Charks, Hen အိမ်များကိုတည်ဆောက်ခြင်း, ကော်မရှင်လေ့လာရေးခရီး (!) ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဆင့်မြင့်ကြက်ဥမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုတည်ဆောက်ရန်အာကာသလေ့လာရေးခရီး (!) ကိုဖွင့်ရန်။
incremental (clicker) ဂိမ်း Core, Egg, Inc. သည်ဥပမာအားဖြင့်ထူးခြားသောခံစားမှုနှင့်ကစားနည်းကိုပေးသည့် Simulation Games မှဒြပ်စင်များစွာအသုံးပြုသည်။ မီနူးများအစားသင်သည်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာအရောင်တောက်တောက် 3D ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ကြက်တစ်ကောင်အတွက်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောပုံရိပ်များဖြင့်တင်ပြသည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပညာရှိစွာရွေးချယ်ခြင်းအပြင်သင်၏အရင်းအမြစ်များကိုချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီးထိရောက်သောကြက်ဥလယ်ယာမြေများကိုသေချာစေရန်သင်၏အရင်းအမြစ်များကိုဟန်ချက်ညီအောင်ပြုလုပ်ရမည်။
ဒီနေရာမှာလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။ ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကြက်ဥခြံကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုလေ့လာရန်သင်၏အချိန်ကိုယူပါ။
ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိသောတိုးပွားမှု (Clicker) ကစားသမားများသည်ဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံးလိုအပ်သောကွဲပြားသောကစားနည်းများမှရရှိသောအသစ်သောကစားနည်းနှင့်အတိမ်အနက်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိအ0ိုကြက်ဥလယ်ယာမြေတစ်ခုရှိရန်အန္တိမရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိရန်သင်၏အချိန်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုရန်အတွက်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ဂုဏ်သိက္ခာများစွာတွင်မဟာဗျူဟာများကိုဟန်ချက်ညီရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အင်္ဂါရပ်များ - ရိုးရှင်းသော, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်ရန်
သုတေသနပစ္စည်းများ - ရာနှင့်ချီသောစိန်ခေါ်မှုများ
- မတူကွဲပြားသော Hen အိမ်များနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်များ (Pun) Prestige System ဂိမ်းသည်အသစ်သောခံစားမှု, ကုန်းပတ်ပြစက်များနှင့်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနှင့်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာခြင်းတို့ဖြင့်ကစားခြင်း,
ဘာအသစ်လဲ Egg, Inc. 1.21.2
I Spent $100 on Virtual Eggs... (Egg, Inc.)
Unlimited golden egg and money glitch for egg inc!
Egg, Inc. 1.21.0
Egg, Inc. 1.20.10
Saw myo chit Saw myo chit